देहत्याग गरेकि सियाकाे मृत्यु पश्चात छाडेकि यिनै टिकटक भिडियोहरू बने भाइरल (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > देहत्याग गरेकि सियाकाे मृत्यु पश्चात छाडेकि यिनै टिकटक भिडियोहरू बने भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)
देहत्याग गरेकि सियाकाे मृत्यु पश्चात छाडेकि यिनै टिकटक भिडियोहरू बने भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)
admin June 29, 2020 जीवनशैली, भिडियो	0
एजेन्सी/ भारतमा एक अर्की कलाकारले देहत्या’ग गरेको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । उनी सुशान्त जस्तै फिल्मी जगतकी नभएर टिकटकमा चर्चित युवती हुन् । टिकटक मार्फत निकै चर्चित बनेकी १६ वर्षीया सिया कक्करले देह त्या’ग गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । उनले किन त्यस्तो निर्णय गरिन् भन्ने खुलेको छैन ।
प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको भएपनी यसको कारण खुलस्त हुन सकेको छैन । अघिल्ले दिन सम्म पनि खुसी मुडमै देखिएकी उनको अचानक यस्तो खबर पाएर फ्यान दुखी भएका छन् । उनले अघिल्लो दिन पनि टिकटक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् । जसमा उनी खुसी नै देखिन्छिन् ।
उक्त टिकटकहरुलाई लाखौ-करोडौ पटक हेरिएको छ । देहत्या’गको त्यस्तो कुनै संकेत भिडियोमा गरिएको छैन । उनी कुनै कुरालाई लिएर चिन्तित भएको संकेत पनि भिडियोबाट पाउन सकिदैन । निधन भन्दा २३ घण्टाअघि उनले इन्ट्राग्राममा टिकटक भिडियो सेयर गरेकी छिन् । जसमा उनले कुनै संकेत गरेकी छैनन् । केहीअघि चर्चित कलाकार सुशान्त सिंह राजपुतले पनि देह’त्या’ग गरेका थिए ।
हेर्नुहोस् उनको अन्तिम १० टिकटक यस्तो छ ।-डीथ्रीअनलाइनबाट।
२ फलफूल व्यापारी कुलेश्‍वरबाट ६५ लाख नगदसहित पक्राउ
पांच बर्षको हुदा हराएका पुजा देवकोटाको बुवा अझै फर्किएनन्! आफ्नै कथामा मार्मिक गीत गाउंदा आफै रोइन् पुजा (भिडियो)
मिस वल्डमा शृंखला खतिवडालाई सोधिएका यी ३ प्रश्न, शृंखलाले दिएको उत्तर (भिडियोमा हेर्नुस)
बिरामी बहिनीलाई गर्यो घरबेटीले यस्तो घिनलाग्दो काम! के अब मानवता हराएकै हो त ? (हेर्नुहोस भिडियो)